Amakhonsoli - Gadget News | Izindaba zeGajethi (Ikhasi 2)
U-ElRubius uhlele umqhudelwano wama-Fortnite onama-youtuber ayi-100 owedlula ababukeli bukhoma abangu-700.000
I-ElRubius yahlela ngoJuni 22 umqhudelwano lapho ama-youtubers ayi-100 abhekana khona kanye nabanye abantu ...
I-XboX One X yama-euro angu-189,95. Leli uhlelo lokuphinda lunikezwe yi-GAME
Uma ucabanga ukuvuselela ikhonsoli yakho yakudala ye-Xbox One X, manje kungaba yisikhathi, ngoba singayithola ngama-euro angama-190 ngokuletha ikhonsoli yethu yakudala
Ama-PlayStation Hits: I-PS4 ishaya ama-euro angama-19,99 nje
AbakwaSony bamemezele ukwethulwa komugqa omusha wemidlalo ngaphansi kwegama elithi PlayStation Hits ngama-euro angu-19,99 kuphela
INintendo switchch izokuvumela ukuthi ujabulele i-Netflix ne-YouTube kungekudala
Ngokusho kokuvuza kwakamuva, zombili iNetflix neYouTube zingafika kuNintendo Shintsha kungekudala.
I-Fortnite yeNintendo Switch ilandwe kumadivayisi ayizigidi ezi-2 ngamahora angama-24 kuphela
Ukufika kweFortnite kuNintendo switch kube yimpumelelo entsha yomdlalo wemfashini futhi kuqoqwe okungaphezulu kokulandwa kwezigidi ezimbili emahoreni angama-2.
Zonke izindaba ezivela kuNintendo ku-E3 2018
Inkampani yaseJapan iNintendo yethule ngokusemthethweni izindaba ezilandelayo ezizofika kuSwitch ku-E3 2018 eLos Angeles
I-Fortnite manje isiyatholakala ngeNintendo Shintsha ngokuphelele
Umdlalo oyimfashini emhlabeni wemidlalo yevidiyo, iFortnite, usanda kufika ku-Nintendo's flagship console, iNintendo switch
Zonke izindaba ze-PlayStation ku-E3 2018
Lezi yizo zonke izindaba ezivela kwaSony zePlayStation ezethulwe yizizwe ngezizwe zaseJapan e-E3 2018.
Ukubuyiselwa kwe-Electronics Arts E3 2018
Ingqungquthela yokuqala ebalulekile ye-E3 2018 ibilokhu ibhekene ne-Electronics Arts nalapho izindaba zigqama khona ngokungabikho kwayo.
I-Valve ithi ngeke ihlunge imidlalo etholakala ku-Steam
I-Valve ishicilele isitatimende lapho ithi khona indawo yayo yokudlala ye-Steam izoyeka ukuhlunga imidlalo etholakala endaweni yesikhulumi se-Steam
Le yimidlalo yamahhala ye-PlayStation Plus ne-Live With Gold ngoJuni 2018
Ngezansi sikukhombisa ukuthi yimaphi amageyimu wamahhala kokubili abakwaSony nabakwaMicrosoft abasinikeza wona ngezinsizakalo zabo zokubhaliselwe zeXbox nePlayStation
IFortnite for switchch ingaba ngokoqobo uma lokhu kuvuza kuqinisekiswa
Ngonyaka odlule, okube semfashinini emidlalweni yevidiyo izimpi zeBat Royale, ...
I-Pokémon Lets Go Pikachu ne-Eevee, imidlalo yokuqala ochungechungeni lwe-switchch
I-Pokémon Lets Go Pikachu ne-Eevee: Imidlalo emisha yeNintendo Shintsha. Thola okuningi ngemidlalo emisha eza kukhonsoli ngokuhamba konyaka.
I-Atari VCS isiyatholakala ngoku-odwa ngaphambili
Iphrojekthi yokubuyisa imali e-Indiegogo inikeza okuthile okungaphezu kokukodwa kwalabo abakhona abangayikholelwa, inganekwane ...
AbakwaSony bayavuma ukuthi ukuphela komjikelezo we-PlayStation 4 sekuzofika
Inkampani yaseJapan iqinisekisa ukuthi ukuphela komjikelezo we-PlayStation 4 emakethe sekuvele kuzokwenzeka. Ngakho-ke umhlaba ulungiswa ukufika kwekhonsoli yakho entsha. Sizokwazi okuningi ngezinhlelo zikaSony kungekudala.
ICall of Duty Black Ops IIII izofaka imodi ye-Battle Royale
Uhlobo olulandelayo lweCall of Duty lijoyina iqembu lempi futhi lizohlanganisa le modi ngaphakathi kweBlack Ops IIII
INintendo NES Classic Mini izobuyela ezitolo ngoJuni 29
Uzoba nethuba elisha lokuthola iNintendo NES Classic Mini. Futhi ungakwenza kusuka ngoJuni 29 olandelayo
Uhlelo olusha lwe-Steam Link luzokuvumela ukuthi udlale imidlalo kuselula yakho ye-Android noma ye-iPhone
I-Valve imemezele ukuthi ezinsukwini ezimbalwa kuzoba nohlelo lokusebenza lwamahhala lwe-iPhone ne-Android oluzokuvumela ukuthi udlale izihloko zepulatifomu ngeselula yakho
I-Wallmart ihlunga ezinye zezihloko ezilindelwe kakhulu ezivela ku-E3
IWallmart Canada ingeze kwikhathalogi yekhasi layo eliku-inthanethi iningi lezihloko ezizobona ukukhanya kwi-E3 elandelayo ezobanjwa emasontweni ambalwa.
INintendo switchch Online izoba nesitoreji samafu
INintendo switchch Online izoqala umsebenzi wayo ngoSepthemba. Thola okuningi mayelana nokwethulwa kwensizakalo eku-inthanethi yekhonsoli nezinhlobo zokubhaliselwe esikutholayo.
Kuboshwe iqembu labaduni bePUBG eChina
UTencent, ongomunye wabathuthukisi be-PUBG, wenza konke okusemandleni ukwenza ukuthi abaduni bathengise ama-cheats anikeza izinzuzo zomdlalo ukuze babone amathambo abo ejele.
INintendo switchch Online izofika ngoSepthemba kulo nyaka
NgoSepthemba olandelayo, iNintendo izokwethula isevisi yayo yokubhalisa online, isevisi ngokuya ngawo wonke amahemuhemu ezobizwa ngama-euro angama-20 ngenyanga.
USteven Spielberg uthi wadlala uMario ku-PlayStation
USteven Spielberg umemezele kwabezindaba baseJapan ngesikhathi kukhuthazwa iReady Player One, ukuthi wadlala uMario ku-PlayStation ukulungiselela ukukhiqizwa kwefilimu.
Kuvuza i-GTA V ne-Zelda entsha njengezinkanyezi ezikhona zeNintendo Shintsha i-E3 2018
Kuvele isithombe lapho singabona khona ukuthi yini ezoba yizinto ezintsha ezintsha zeNintendo ze-E3 2018, umbukiso obaluleke kakhulu wemidlalo yevidiyo ebanjwe kulo nyaka kusuka ngoJuni 12 kuya ku-15 eLos Angeles.
Umdlalo we-Fortnite ususa imicibisholo eqondisiwe
Abafana bakwa-Epic baphoqeleke ukuthi baqede enye yezinto ezintsha abazethule emasontweni ambalwa edlule, ngemuva kokubona ukuthi abasebenzisi bazizwa kanjani bengavikelekile kulolu hlobo lwesikhali lapho lusetshenziswa isitha.
Ukubuyekezwa kokuqala kukaNkulunkulu weMpi kulungile impela
Umshicileli okhethekile ubeka uNkulunkulu Wempi njengomdlalo omuhle kakhulu wonyaka. Thola okuningi mayelana nokubuyekezwa kwe-rave umdlalo we-PS4 owuthola kubagxeki.
Ngesonto elizayo ungalanda i-PUBG mahhala ku-Xbox One
Uzokwazi ukulanda i-PUBG mahhala ku-Xbox One yakho ngesonto elizayo. Thola kabanzi mayelana nalesi senzo esizokuvumela ukulanda umdlalo odumile mahhala.
Ukwethulwa kwe-PlayStation 5 akukenzeki
Ngaphandle kokuthi amanye amahemuhemu akhombisa ukuthi uSony angavula isizukulwane sesihlanu se-PlayStation ngonyaka ozayo noma ekupheleni konyaka, konke kubonakala kukhombisa ukuthi kusazodingeka silinde okungenani iminyaka embalwa.
INintendo switchch izothola iqoqo lemidlalo ye-SNK
I-SNK yethula iqoqo elikhethekile lomdlalo weNintendo Shintsha. Thola kabanzi mayelana naleli qoqo elikhethekile eliza kubasebenzisi bohlelo lweNintendo lokhu kuwa.
ISpyro Reignited Trilogy ifika ngoSepthemba yeXbox One nePS4
ISpyro Reignited Trilogy izofika ngoSepthemba ozayo kuma-platforms ahlukahlukene: i-PS4 ne-Xbox One.Izokwenza lokhu ukugubha iminyaka engu-20 yethulwe isihloko sayo sokuqala.
Amanye amaNintendo Switches ayama ukusebenza lapho exhunywe ethekwini elingekho emthethweni
Ukuvuselelwa kwakamuva kweNintendo switchch kubangela ukududuza okuningi ukuthi kuyeke ukusebenza lapho usebenzisa idokodo elingekho emthethweni.
AbakwaSony basika amanani ezingilazi zayo ezingokoqobo i-PlayStation VR ngama-euro ayikhulu
AbakwaSony basanda kumemezela ukwehliswa kwentengo ye-PlayStation VR, ngentengo yayo entsha kungu- $ 299, ukwehliswa kwentengo okungama-25%.
INintendo switchch izokwengeza imidlalo emisha eyi-14 kulo nyaka
INintendo ezandleni zayo kungenzeka ukuthi ikhule kakhulu futhi ithengise ama-consoles amaningi uma ingeza izihloko eziningi ...
AbakwaSony bayeke iPS Vita ngokusemthethweni eSpain
I-PS Vita iyekile ngokusemthethweni eSpain. Thola kabanzi mayelana nesinqumo senkampani sokuyeka ukumaketha ikhonsoli ezweni lethu.
I-Ataribox ibizwa kabusha ngokuthi i-Atari VCS futhi ingabhuka ngo-Ephreli
Ikhonsoli entsha ka-Atari, phambilini ebibizwa nge-Atari VCS, izovula isikhathi soku-oda ngaphambilini ngo-Ephreli, kepha namanje asazi ukuthi izongena nini ngokusemthethweni emakethe.
UTrustmaster Umemezela i-Revolutionary Bluetooth LED Display yePS4
Ezweni lokudlala sinezinketho eziningi ezitholakalayo futhi sibheka kancane izesekeli ezitholakalayo zokududuza okuhlukile ...
UWanle wethula icala eliguqula i-iPhone yakho ibe yiGame Boy yangempela
Shintsha i-iPhone yakho ibe yi-Game Boy enecala le-Wanle. Thola okuningi mayelana naleli cala langempela elisiza ukuguqula ifoni yakho ibe yiGame Boy yangempela esebenza ngokujwayelekile.
Ingxoxo yeqembu iza kuhlelo lokusebenza lwe-Xbox ku-iOS naku-Android
Futhi bekuvele kuthatha uhlelo ukwenza izingxoxo zeqembu ukufinyelela i-Android ne-iOS. Ku…
Yikuphi ikhonsoli yokuthengela ingane
Ukuthengela ingane ikhonsoli akuyona into elula uma singafuni ukuthi kulimaze ukukhula kwayo ngokuhamba kwesikhathi esikhundleni sokuyisiza ukuthi ikhule. Sikufundisa izici okufanele uzicabangele lapho unikeza umdlalo wekhonsoli enganeni encane.
AbakwaSony baklama kabusha i-PS4 Gold yayo, amahedfoni angenantambo
AbakwaSony bakubone kufanelekile, ngemuva kweminyaka, ukuthi baphinde bakhiphe ama-headphone abo ngomklamo omusha omnyama omnyama.
I-PlayStation 4 isizothengisa i-PS3
Ukuthengiswa kwe-PlayStation 4 maduzane kuzodlula lokho kwe-PS3. Thola okuningi mayelana nokuthengiswa kwe-Sony console esivele sidlula isizukulwane sayo sangaphambilini.
I-C64 mini, ukubuya kwe-Commodore 64 kuzoba ngoMashi 29
Umfuziselo weCommodore 64, i-C64 mini, usuvele unosuku lokukhishwa. Izokwenza lokho ngoMashi 29 ngentengo engaphansi kwama-euro angama-100
INintendo switchch ibukeka iphumelela kakhulu kune-Xbox One eSpain
INintendo switchch ibukeka ihlule i-Xbox One ekuthengiseni eSpain, okuyinombolo engeyona eyokukhuthaza iMicrosoft futhi esicabanga ukuthi iyaqhubeka nokumangaza inkampani yaseJapan.
I-Xbox One Exclusive Games Hit Xbox Game Pass Ngosuku Lokuqalisa
Imidlalo ye-Xbox One izobe iza ku-Xbox Game Pass kusukela ngosuku lokuqala. Thola kabanzi mayelana nohlelo olusha lwenkampani lokwethula imidlalo.
Ingabe ungumlandeli we-PlayStation? Yebo, lezi zicathulo zeNike zingezakho
Ngabe ufuna amanye amateki okukhumbula esinye seziduduzi ezinkulu zaso sonke isikhathi? I-Nike ne-PlayStation babambisene ukuletha i-Nike PG-2
INintendo Labo, entsha evela eJapan lapho amakhadibhodi engumbonisi ophambili
INintendo imangaze wonke umuntu ngokwethulwa komqondo wayo omkhulu olandelayo: Nintendo Labo. Le platform entsha isimangalo esihle sezingane nabadala.
AbakwaSony bathengise induduzo engaphezu kuka-5,9 million yePS4 kulo Khisimusi
Futhi ngukuthi yize ukuncintisana kudeskithophu kududuza nezizukulwane ezintsha zeNintendo kuliqiniso ...
INintendo switchch ilingana nerekhodi le-PlayStation 2 eJapan
I- "N" enkulu ifinyelela amazinga abalulekile okuthengisa eJapan nge-switch switch, ephula amarekhodi asethwe yi-PlayStation 2.
Ikhibhodi negundane le-Xbox selizofika emakethe
Konke kubonakala kukhombisa ukuthi iMicrosoft ekugcineni izimisele ukwethula ikhibhodi ethile negundane le-Xbox One, ngemuva kweminyaka eminingi yamacala.
AbakwaSony abathengisi ama-Smartphones amaningi, kepha ukuthengisa kule PS4 Black Friday kube yirekhodi
Futhi ukuthi inkampani uqobo iza nezitatimende ezithile ezinamandla lapho ikhuluma ngokuthengisa ...
Umklami wevidiyo: umsebenzi onekusasa elihle
Eminyakeni yamuva nje, ubungcweti bomqambi wamageyimu wevidiyo sekungokunye okufunwa kakhulu futhi okunenzuzo embonini.
INintendo yenza uchungechunge lokuvinjelwa okukhulu kubasebenzisi be-3DS
INintendo ibizokwenza uchungechunge lokuvinjelwa okukhulu kwama-akhawunti kubasebenzisi bekhonsoli ephathekayo yeNintendo 3DS. Lokhu ...
IMicrosoft ayifuni ukuthi uvikele i-Xbox One kuma-surges
Abasebenzisi abaningi beziduduzi zamavidiyo noma amakhompyutha ezingeni "lobungcweti" bathambekele ekuthengeni imishini yokwanda.
I-Xbox One X entsha iqala ngonyawo olungalungile eJapan
IMicrosoft iyaqhubeka ngaphandle kokuphakamisa ikhanda layo eJapan, lapho ngemuva kokwethulwa kweXbox One X ithengise kuphela amayunithi angaphezu kwe-1.300 kuphela.
INintendo ihlela ukwenza okungaphezu kwezigidi ezingama-30 zeNintendo Switches ngonyaka ozayo
INintendo ifuna ukukhulisa inani lamakhonsoli okuzokwenziwa ngonyaka ozayo, ikhulisa umkhiqizo ube ngamayunithi ayizigidi ezingama-30.
Ukushintsha i-hard drive ye-Xbox One X yakho kukushiya ungenayo iwaranti
Kulula kanjani ukulahla iwaranti ngqo ku-Xbox One X, ayikuvumeli nokuthi uguqule i-hard drive yekhonsoli yomdlalo.
I-Amazon Prime Video manje isiyatholakala nge-Xbox One
Ividiyo ye-Amazon esiteshini sokufunwa isanda kwethula uhlelo lwe-Xbox One, ukuze ikwazi ukujabulela i-Amazon Prime Video evela ku-Xbox
IMicrosoft ilahla uKinect ngokuphelele
Eminyakeni engu-7 ngemuva kokwethulwa kwayo, iMicrosoft ikuqinisekisile ukuthi izoyeka ukukhiqiza iKinect, ngenxa yempumelelo encane ebinayo emakethe selokhu yethulwa.
I-VTech KidiBuzz, i-smartphone ye-Android yabancane ekhaya
I-VTech KiddiBuzz ukubheja kwenkampani okuncane kunakho konke kwendlu enedivayisi enemidlalo efana nomakhalekhukhwini
INintendo Switch isivele ikuvumela ukuthi uxhume ama-headphone angenantambo
Ukuvuselelwa kwakamuva kweNintendo Switch ekugcineni kusivumela ukuthi sixhume ama-headphone angenantambo nge-adaptha ye-USB
IGran Turismo Sport yePS4 isiyatholakala
IGran Turismo Sport ebikade ilindelwe, okungenye yezimfanisi ezihamba phambili zezimoto zePS4 isiyatholakala ngokusemthethweni
I-DOOM yeNintendo switchch iyeza ngoNovemba 10
INintendo Spain isanda kumemezela ngokusemthethweni ukuthi sizokwazi nini ukujabulela iDOMOM edume kwiNintendo Shintsha.
I-Super Retro-Cade, enye indlela ye-Retro-Bit yabo bonke abadlali
ISuper Retro-Cade iyindlela ehlukile yeRetro-Bit ehlose ngayo ukuhlanganisa zonke izinduduzo ze-arcade kusukela yasungulwa kuze kube manje kukhonsoli eyodwa.
ISeedi, i-hybrid console ekuvumela ukuthi udlale imidlalo ku-CD
ISeedi yiphrojekthi efuna ukuxhaswa. Kuyikhonsoli ehlanganisiwe ezokuvumela ukuthi udlale imidlalo ngefomethi ye-CD-ROM
INintendo ukuvala iSitolo se-Wii ngo-2019
UNintendo ukuqinisekisile ukuthi ngoJanuwari 31, 2019 iWii Shop izoyeka ukusebenza ingunaphakade, iyeke ukuxhasa lezi ziduduzo
AbakwaSony sebezokwethula isizukulwane sesibili se-PlayStation VR
Ezinsukwini ezimbalwa, isizukulwane sesibili seSony's PlayStation VR sizofika eJapan, izibuko ezizothatha amasonto ambalwa ukutholakala emhlabeni wonke
Konke odinga ukukwazi mayelana ne-SNES Mini entsha
Inkampani ye-big N ngeke ime, manje sizokwazi ukujabulela olunye uhlelo, ikakhulukazi iSNES Classic Mini.
UNintendo "uqhubeka" enza abangani ku-YouTube
Nakulokhu futhi, uNintendo ukhombisile futhi ukuthi le nkampani isabambekile esikhathini esedlule, iphinde yavimbela ukusakazwa kwemidlalo yayo ebukhoma ku-YouTube
IMicrosoft yenza indali ngeXbox One S ngokuhlonipha uPaul Walker
IMicrosoft izothengisa i-Xbox One S ngentela uPaul Walker, ikhonsoli edlala imibala yemoto yokuqala ochungechungeni
Ihluke kanjani i-PlayStation 4 Pro ne-Xbox One X
Uyawazi umehluko phakathi kwe-Xbox One X ne-PlayStation 4 Pro? Faka futhi uthole ukuthi yikuphi okungcono kokududuza okubili.
Yonke le yimininingwane yokwethulwa kanye nentengo ye-Ataribox
Namuhla sinalo lonke lolo lwazi, sizokutshela ngayo yonke imininingwane ye-Ataribox futhi nangentengo yayo.
Manje sesingayibekisa i-Xbox One X eSpain
Ikhonsoli entsha ye-Microsoft, i-Xbox One X isiyatholakala ngoku-odwa ngaphambili ngekhasi le-Microsoft Store.
Le yindlela emangalisayo i-CoD: WWII edition ekhethekile ye-PlayStation 4
AbakwaSony bamemezele lolu hlobo oluhle kakhulu lwe-PlayStation 4 CoD: Uhlelo lweWWII ngomklamo omuhle wombala kuhlobo olulinganiselwe.
Ukubhujiswa kweNintendo switchch neMinecraft yeNintendo 3DS: izinto ezintsha ezintsha zeNintendo Direct
KuNintendo Direct, inkampani yaseJapan isikhombisile yonke imidlalo emisha ezofika ezinyangeni ezizayo kwi-3DS naku-switch.
Ungakhokhi ngaphezu kwama-euro angama-80 nge-SNES Classic, iNintendo ikutshela
INES Classic isiphenduke into yomqoqi wamaquasi esezandleni zabasebenzisi abambalwa ...
I-Amazon Prime Video iyatholakala ku-PlayStation Spain
I-Amazon Prime Video iza kuma-PS3 ne-PS4 consoles. Futhi ukuthi kusukela manje, abasebenzisi baseSpain bazokwazi ukujabulela insiza ye-Amazon
Okuhlangenwe nakho kokudlala kwe-Xbox One X kuzoba seduze kakhulu kwe-PC
Omunye wabaphathi be-Xbox ukuqinisekisile ukuthi i-console yakhe elandelayo, i-Xbox One X, izoba nokuxhaswa kwekhibhodi negundane. Yize futhi iveze izinto eziningi
KONKE Isilawuli, isilawuli sendawo yonke sokudlala kukhompyutha nakuzo zonke izinto eziduduzayo
Umyalo wendawo yonke obewulindele wemidlalo yakho ufika. Isilawuli SONKE siyahambisana neningi lamapulatifomu
Sikukhombisa i-trailer yokuqala ye-Age of Empire IV
Ngokuphikisana nakho konke ukungahambi kahle, abafana baseMicrosoft bavele bethula i-trailer yokuqala ye- Age of Empires IV
I-Xbox One S Minecraft Edition, yabalandeli beqiniso kuphela
IMicrosoft yethule uhlobo olusha olukhethekile lwe-Xbox One S yayo ezotholakala ngo-Okthoba. Le yi-Xbox One S Minecraft Edition
I-XBox One X: itholakala kusuka ngoNovemba 7 kuma-euro angama-499,99
IMicrosoft ibiphethe ukuvula umcimbi we-Gamescon. Futhi ukwenzile ngekhonsoli yakhe entsha egxile kokuqukethwe 4: i-Xbox One X
Lezi yizici ezintsha ze-Firmware 5.0 ye-PlayStation 4
I-firmware ye-PlayStation 5.0 isiseduze, kangangokuthi ngo-Agasti 4 kwethulwe iBeta yayo yomphakathi yokuqala
UNintendo ubhekene necala lokuqala leNintendo Shintsha iJoy-Con
Ezikhathini zakamuva sibonile ukuthi ama-troll patent abe kanjani enye yezinkinga ezinkulu ku ...
UBethesda umemezela uhlelo lwe-Fallout 4 Game of the Year
I-Bethesda izonikela nge-Fallout 4 njengoMdlalo wonyaka ngenguqulo ephelele, ngayo yonke i-DLC etholakalayo ngalesi sikhathi ngoSepthemba 26.
Shintsha i-Wii U GamePad yakho ibe yi-Windows 10 PC
Ngenxa yomcabango womsebenzisi, ukwazile ukuguqula i-gampad ye-Wii U ibe yikhompyutha ephelele ne Windows 10 ebuye ilingise i-Wii U
NgoJulayi 21, abakwaNintendo bazokwethula uhlelo lokusebenza lweNintendo switchch Online
Abafana bakwaNintendo bazokwethula uhlelo lokusebenza lweNintendo switchch Online lwamadivayisi eselula ngoJulayi 21.
Manje kungenzeka ukujabulela imidlalo ehlukahlukene ye-PlayStation 4 kwi-PC yakho
Ngemuva kokulinda isikhathi eside, manje sekuyenzeka ukujabulela imidlalo eminingi ye-PS4 kwikhompyutha yethu, ukuyilanda ku-PlayStation Now.
Inkampani edumile i-Atari isebenza kukhonsoli entsha yomdlalo wevidiyo
Isikhulu se-Atari uFred Shesnais ukuqinisekisile ukuthi u-Atari ulungiselela ikhonsoli entsha yokudlala ebizwa nge-Ataribox futhi isuselwa kubuchwepheshe be-PC.
Le yi-Xbox One X, ikhonsoli enamandla kakhulu emlandweni
Sikukhombisa imininingwane ye-Xbox One X entsha, ikhonsoli ezongena emakethe ngoNovemba 7.
Udingani i-PlayStation VR futhi kungakubiza malini konke?
Ukuze usebenzise i-PlayStation VR ekhaya lakho uzodinga amanye amagajethi ngaphandle kwehedisethi yangempela ye-PS VR kanye nekhonsoli ye-PlayStation 4.
Izinto zokwenza i-iPhone zidala izinkinga ekukhiqizeni iNintendo Shintsha
Eminye imibiko ikhuluma ngokubambezeleka kuketanga lokukhiqiza iNintendo Shintsha ngenxa yokushoda kwesitoko sezinto ...
Yini emulator engcono kakhulu ye-PlayStation 2?
Yini emulator engcono kakhulu yePS2? Hlala nathi uzobona ukuthi yikuphi okuthakazelisa kakhulu kulawa ma-emulators nokuthi ungayilungisa kanjani.
INintendo yethula iNintendo 2DS XL ngokumangala
Ngemuva kokumemezela ukuthi babeka ukukhiqizwa kweM Mini Mini eceleni ukugxila kweminye imisebenzi, inkampani ...
INintendo iqinisekisa ukuthi ngeke isaphinde yenze ama-NES Mini Editions
Futhi sebevele bayekile ukukwenza eJapan ezinsukwini ezimbalwa ezedlule futhi manje sekuqinisekisiwe ngokusemthethweni ukuthi izindaba ...
INintendo ikuphinda kabili ukukhiqizwa kweSwitch
Kubukeka sengathi ukuthengiswa kwekhonsoli entsha yeNintendo kuhamba kahle kakhulu futhi inkampani isivele ijabulela kakhulu ...
AbakwaSony sebesondele ekuvalweni kwekhasi ngeSony PlayStation 3 enkulu
Kubukeka sengathi iSony console isiseduze nokudlula futhi inkampani isivele ikhuluma ngokuyeka ...
I-firmware ye-PlayStation 4.50 ibangela izinkinga zenethiwekhi
Njengoba abasebenzisi abaningi be-PlayStation beqala ukumangalela, babona induduzo yabo abayithandayo iqala ukuhlupheka ngezinkinga zenethiwekhi.
Isibalo esimangazayo seNintendo Shintsha esithengisiwe singu: 44.673 eSpain ngezinsuku ezimbili nje kuphela
Ezinsukwini ezimbili nje kuphela inkampani ithengise ngokusemthethweni ama-44.673 Nintendo Switch consoles, ngaleyo ndlela yeqa inani le ...
Ungadlala iNintendo Classic Mini NES ngeJoy-Con
Wake wacabanga ukuthi kungakuhle ukubhangqa iNintendo Classic Mini NES ne-switch? Dlala i-NES Classic Mini ngeJoy-Con.
Izinsizakalo zokusakazwa kwevidiyo nazo zizofika kuNintendo switchch
Ngokusho kukamongameli uNintendo America, inkampani yaseJapan ixoxisana ngamathuba okuba ikwazi ukujabulela ukusakazwa kwezinsizakalo zevidiyo
I-PlayStation 4.50 Firmware 4 ingahle ize kakhulu
I-firmware 4.50 ye-PlayStation 4 efaka phakathi kwezinye izinto eziningi ezintsha ukwesekwa kwendabuko kwama-hard drive kungafika ngokugqamile.
Uma uhlela ukuthenga iNintendo switchch, le vidiyo ingakususa isifiso sakho
Ngaphandle kokuthi i-Nintendo console entsha yephula amarekhodi, abasebenzisi bokuqala abayijabulelayo baveze izikhalazo eziningi
Amarekhodi wekhefu lokuthengisa iNintendo Shintsha ngokuya ngeNintendo uqobo
Sisesikhathini esiyisihluthulelo seziduduzo eziphathekayo futhi uma sibheka kancane kulokhu ...
INintendo Shintsha ayikuvumeli ukonga imidlalo ku-microSD
Umkhawulo wokugcina osinikezwa yiNintendo Shintsha uhlobene nokuthi kungenzeka yini ukuthi ulondoloze imidlalo ekhadini le-MicroSD.
Ukulawulwa komzali kweNintendo Shintsha kusuka kunoma iyiphi idivayisi ye-Android
Ukuzwela kwe-console okwamanje yiNintendo Shintsha esanda kwethulwa, ngokungangabazeki. Le khonsoli entsha ...
INintendo switchch idlula ezandleni ze-iFixit
Abafana abaku-iFixit basanda kuqaqa iNintendo iFixit entsha, futhi bakhombisile ukuthi amamojula we-console enza kube lula ukulungisa.
I-Xbox Game Pass: Dlala imidlalo engaphezu kuka-100 ngo- $ 9,99 ngenyanga
I-Xbox Game Pass yisevisi entsha yokusakaza ividiyo ezongena emakethe ezinyangeni ezizayo.
Singadlala iLegend of Zelda kuphela kwiNintendo Shintsha amahora amathathu
Ngokusho kwabafana baseTweaktown, impilo yebhethri yeNintendo switchch edlala iLegend of Zelda izoba amahora ama-3, imizuzu emi-2 namasekhondi angu-57.
INintendo switchch ngeke ihambisane namahedfoni we-bluetooth
Izindaba zakamuva ezihlobene neNintendo Switch zithi amahedisethi we-bluetooth ngeke akwazi ukuxhunyaniswa nekhonsoli.
Amayunithi okuqala eNintendo switch "athunyelwe" ngephutha, abebiwe
Inkampani yaseJapan iNintendo isanda kuqinisekisa ukuthi amayunithi asevele ejikeleza phakathi kwabanye abasebenzisi antshontshiwe.
NgoJuni 30, iCrash Bandicoot edumile izofika ku-PlayStation 4
Yebo, lona akusiwona omunye waleyo midlalo owaziwa yizo zonke izizukulwane kepha sibhekene nenye yalezo ...
Ukungaxhunywanga kokuqala kweNintendo switch
Sikukhombisa i-unboxing yokuqala yeNintendo Shintsha, ikhonsoli engeke ingene emakethe kuze kube nguMashi 3 olandelayo.
INintendo kungenzeka ingenzi amayunithi amaningi we-NES Classic Mini
Amahemuhemu akhombisa ukuthi uNintendo wayengamisa ukwenziwa kweNES Classic Mini ephumelelayo ngaphandle kwezizathu ezidaluliwe okwamanje.
INES Classic Mini manje isekela ukuqhuba imidlalo ye-SNES, Sega Genesis ne Game Game
I-NES Classisc Mini iyaqhubeka nokuthuthuka, ngaphandle kweNintendo, futhi manje ikuvumela ukuthi usebenze imidlalo evela ku-SNES, Sega Genesis naku Game Boy.
Ukukhanselwa kokuqala kweNintendo switchch kufika ngenxa yokushoda kwesitoko
INintendo iqala ukuba nezinkinga ngeNintendo Shintsha futhi ukuthi kudingeke ukuthi ikhansele ukubhuka okuthile ngenxa yokushoda kwesitoko sedivayisi entsha.
Kubukeka sengathi lezi zindaba azisoze zafika kepha ekugcineni abakwaSony benze isitatimende kuwebhusayithi yabo esemthethweni e ...
INES Classic Mini ifinyelela amayunithi ayisigidi nesigamu athengisiwe yize kunesitoko
INintendo izuze impumelelo entsha futhi lokho ukuthi isivele ikwazile ukuthengisa isigidi nesigamu seNES Classic Mini yize kunesidingo esivele sikhona.
INintendo yethula isikhangiso seNintendo Shintsha isebenzisa ngokunenzuzo ukudonsa kweSuper Bowl
INintendo switchch izongena emakethe ngoMashi 3, kepha namuhla singabona esinye sezimemezelo zokuqala zekhonsoli entsha.
UNintendo uchaza izizathu esingenakuthenga i-NES Classic Mini
I-NES Classic Mini ithengiswe yonke indawo futhi uNintendo ubesefuna ukuza nencazelo ebesivele sikwazi ngaphezu kwalokho.